Ivenkile yeApple ilungiselela ukubhukisha okuqala ngo-14: 00 emva kwemini | Ndisuka mac
Ivenkile yeApple ilungiselela ukubhukisha okuqala ngentsimbi yesi-14: 00 emva kwemini.
Ngo-Epreli 20, uTim Cook kunye neqela lakhe babhengeza Iindaba zeApple oko kuza kungekudala. Ngokukhawuleza kangangokuba namhlanje ukusukela nge-14: 00 emva kwemini sinokuqala ukugcina iimveliso ezintsha. Sithetha ngeMac entsha, i-iPhone emfusa, ii-AirTags, nePad Pro.Yonke le nto ingaba yeyakho kungekudala nangona kuxhomekeke kwinto oyikhethayo kuya kufuneka ulinde ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi. Inyani yile iwebhu iyalungiswa yezikhukula zabasebenzisi ezidityaniswe ngaxeshanye ukugcina imveliso abayifunayo.
Isiqwenga senkwenkwezi ngu iMac entsha. Ifumaneka ngemibala eliqela, lixesha lokuba ufunde uphononongo esele silwenzile kwaye uyazi imibala ekhoyo, kuba ngoku kwiWebhu awukwazi ukufikelela kuyo, kuba ivaliwe ilinde ukuba ivulwe ngo-14: 00 emva kwemini. ukuze ndikwazi ukwenza ugcino. Khumbula ukuba iza ne-M1 chip entsha ngaphandle kwezinye iindaba ezimangalisayo. Amaxabiso aqala ukusuka kwi-1.449 euro kunye nokufika kwayo akulindelwanga kude kube phakathi ku-Meyi. Ukuba uthatha ixesha elide, into eqhelekileyo kukuba ixesha lokuhambisa lilibaziseke ngokwaneleyo.
Olunye uhlobo olutsha yinto AirTags. Ngexabiso elinokufikeleleka ngaphezulu kwe-iMac, ezi lebhile zinokufunyanwa kwi-euro ezingama-35 kwiyunithi nganye, kuya kubakho iipakethe zezixhobo ezine ze-euro ezingama-119. Iyafumaneka ukuhanjiswa ukusuka nge-30 ka-Epreli. Kodwa iyafana neMac. Ukuba ulinda ixesha elide, siya kungena ngoMeyi.
Iyafumaneka kwakhona ukusukela kwisiqingatha sesibini sikaCanzibe, i iPad Pro Yenye yeencwadana ezintsha ezinokuboniswa ngo-Epreli 20 odlulileyo. Ngobuninzi beenkcukacha ezintsha kunye nezinamandla, i-iPad entsha ene-M1 iya kuba yenye yezona zinto zibalulekileyo. Kwinguqu yayo ye-intshi eyi-11 ukusuka kuma-euro angama-879, ngelixa imodeli ye-12,9-intshi iza kufika isuka kwi-1.199 euros.
Okokugqibela sinokuyifumana entsha IPhone 12 emfusa ngexabiso elifanayo nelabanye abantakwabo. Ngokufumaneka ukusukela nge-30 ka-Epreli. Isipho esihle sosuku lomama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ivenkile yeApple ilungiselela ukubhukisha okuqala ngentsimbi yesi-14: 00 emva kwemini.
I-Apple inciphisa ixabiso le-iMac ye-intshi ezingama-300 ngeglasi eyenziwe ngombala nano phantse ngama-27 euros
Amaqela kaMicrosoft eMacOS ahlaziywa ngeendaba ezibalulekileyo